Fahad Yaasiin oo safar deg-deg ah u baxay | KEYDMEDIA ONLINE
Fahad Yaasiin oo safar deg-deg ah u baxay
Agaasimaha Hay'adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin ayaa xalay u dhoofay waddanka Qadar, halkaas oo la filayo inuu ku maqnaan doono laba maalin
MUQDISHO, Soomaaliya - Agaasimaha Hay'adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin Xaaji ayaa u ambabaxay safar deg-deg ah kaasoo uu ku aaday waddanka Qadar, sida ay ogaatay Keydmedia Online.
Agaasime Fahad ayaa gaaray Dooxa, Qadar wuxuuna kusoo aadayaa safarkiisa iyadoo magaalada Dhuusamareeb uu ka socdo shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka.
Lama oga sababta rasmiga ah ee socdaalka agaasimaha, balse waxaa la xaqiijinayaa in uu latashi u aaday Dooxa, waxaana la filayaa inuu ku maqnaan doono labada maalin ee soo socota, iyadoo lagu dhaw yahay in shirkii kasocday magaalada Dhuusamareeb uu soo gabagaboobo inkastoo aan la gaarin natiijo la taaban karo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka cusleysanaya inuu fududeeyo qodobada la isku hayo, tanaasulkii ay beesha caalamka usoo jeedisay madaxweynaha ayuusan weli ka muujin aqbalaad.
Si kastaba ha ahaatee siyaasadda kooxda Farmaajo ayaa laga hagaa waddanka Qadar, waxaana furaha koowaad u ah Agaasime Fahad Yaasiin oo xiriir dhaw la leh madaxda dowladda Qadar.